Ngo ukwephulwa eziningi ohlelweni hematopoietic, kuyinto efiselekayo ukuthatha amaphilisi ekhethekile igazi thinners. Ngemva ushintsho ezinye izingxenye uketshezi begazi kubangela ukuthi kuba obukhulu. Futhi lena ingenye yezimbangela ezinkulu ukufa uhlangothi, isifo senhliziyo nezinye izifo ezingathi sína kohlelo senhliziyo nemithambo yegazi.
Zonke thinners amaphilisi igazi, akhiwa kunodokotela, kungenziwa ihlukaniswe izingxenye ezimbili. Eyokuqala wabo - iyona anticoagulants. Le mithi ahloselwe ukwehlisa umsebenzi uhlelo igazi-alo. Baphambé wakhe, futhi lokhu kuholela ekuphelelweni yokuthi kwandisa isikhathi adingekayo kumiswa ihlule. Leli qembu kuhlanganisa izimali "Warfarin", "Heparin", "Thrombotic Ass", "Detraleks" nabanye.
Ngaphezu kwalokho, kukhona anticoagulants nezinye izidakamizwa senzelwe igazi thinners. Zibizwa ngokuthi izidakamizwa antiplatelet. Isenzo sabo kusekelwe yokuthi liphazamisane nqubo engokwemvelo yokufunda ukuphila platelet wokuhlanganisa. Iningi lazo e isakhiwo aqukethe salicylates. Lezi izinto ziyisisekelo aspirin. Ngaphezu wathi ekwakhiweni "Trental" kusho iqembu elibizwa ngokuthi "Ticlopidine», «Cardiomagnyl", "aspirin Cardio."
Khetha ukuthi iyiphi amaphilisi ukuthatha igazi thinners, udinga kuphela udokotela. Kuphela onguchwepheshe ungakhetha imikhiqizo kwesokudla bese usetha umthamo oyifunayo. Ngakho, igazi obukhulu - akusiwona nje ingozi yokufa uhlangothi nokumelwa yinhliziyo. Kuyinto isizathu ukuthi eziwohlokayo ilungiselelo lezitho nezicubu oxygen.
Imbangela amahlule kungaba ukuntula enzyme. Lokhu kuphakamisa ekuqongeleleni imikhiqizo oxidized kwakhiwa kusukela nokonakala yezinhlayiya amaprotheni. Ngenxa yalokho, amangqamuzana egazi abomvu aqala banamathelane. Lokhu ezehlisa exchange umoya-mpilo emzimbeni futhi kuholela yokuthi izitho, izicubu amaseli ziqala ukuba azibulale.
Yabela amaphilisi ngokuvamile ehlambulula igazi kwabesifazane abakhulelwe, iziguli ezinemishini varicose emithanjeni, thrombosis, isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile, ezifweni unhlangothi. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi ukuqonda ukuthi akukho neyodwa kulezi zinkolo izidakamizwa ayenzelwe ukuba rassosat zakhekile amahlule emzimbeni.
Linqume igazi thinners omama abakhulelwe badinga kuphela onguchwepheshe ngemva kovivinyo. Ngokuvamile isizathu ukuthi wezifo zabesifazane uncoma lezi zimali, ukuwohloka kwezimiso isimo nge placenta, ukugeleza kwegazi ukuphazamiseka kuwo.
Phuza amaphilisi igazi thinners ukuvimbela awubalulekile ngaphandle izincomo esifanele kadokotela. Kodwa uma udokotela wezifo zabesifazane zazo ezimisiwe, akunakwenzeka ukuba enqabe ukwelashwa ngendlela. Lokhu kudala ingozi ukuthi ngenxa yegazi viscous ingane ngeke zihlupheka ngenxa yokuntuleka oksijini, ngokufanele, kancane athuthukile. okhulelwe angase yabelwe izidakamizwa ezifana "Curantil 'wesimo asebenzayo kwalo kungukuchotshozwa dipyridamole. It kuklanyelwe ukuqinisa izindonga imithambo yegazi, ngcono igazi microcirculation. Iphinde kuba nethonya inhibitory ku platelet wokuhlanganisa.
Kuleso sibhedlela omama abakhulelwe angethula izidakamizwa "Heparin". Akazange ukuwela placenta futhi umbungu. Kodwa nokuqokwa kwakhe kwandisa ingozi ukubeletha singakafiki isikhathi libangela ukuphuphuma kwezisu. Ukuze ugweme imiphumela enjalo engemihle, lokhu izidakamizwa isetshenziswa kuphela ngaphansi kweso lodokotela.
In izifo eziningi kudingeka izidakamizwa ukuthi ukuvimbela amahlule emzimbeni. Azihlukile futhi varicose emithanjeni. Ngalesi isifo kubalulekile ukuqapha igazi Ukwakheka kanye ukuvimbela ukufingqa yayo. Sekutholakele izinsiza eziseduzane, ezifana amafutha "Lioton". Kusho "Kurantil" noma "Dipyridamole" futhi ivame esimisiwe.
Kulesi isifo, odokotela batusa ukusetshenziswa anticoagulants. Ngaphezu "Kurantil" Tablets angabelwa kwamanye thinners amaphilisi igazi varicose emithanjeni. Ngokuvamile, odokotela batusa imijovo izimali "Clexane" noma "Fraksiparin" kuthiwa ongaphakeme yamangqamuzana isisindo analogs kusho "Heparin".
Uma une Ukuthanda amahlule, kufanele eduze ukuqapha isimo sakho. Phela, kubalulekile ukuvimbela ukwakheka amahlule. Ngenxa yalezi zinjongo ngokuvamile zisebenzisa injectables, isib, "Heparin", noma ongaphakeme yamangqamuzana isisindo analogs yayo. Ngemva olunzulu ukwelashwa ukuphathwa uhlelo ushintsho. Ukuvimbela amahlule entsha linqume amaphilisi okuhlela igazi thinners "Warfarin". Lokhu ejenti kuyinto i anticoagulant engaqondile isenzo ka coumarin nemikhiqizo. Ngo isicelo yayo kubalulekile ukulandela iseluleko wonke kadokotela futhi unamathele umthamo elicacisiwe imiyalelo. Kungenjalo kunobungozi ukopha ezinzima.
With ebanzi deep vein thrombosis bangakwazi ukunikeza ngezinye izindlela. Ezimweni ezinjalo, i-ejenti kungenzeka Kunconywa, elikwaziyo ncela like amahlule. Ngakho, odokotela bavame linqume izidakamizwa "Alteplase".
Ngemva Imisebenzi eminingi phezu kwenhliziyo, ikakhulukazi uma efakwe valve mechanical, kumelwe uthathe amaphilisi ekhethekile igazi thinners. Kungenjalo kunobungozi amahlule. Kulokhu, kungaba zabelwe "Warfarin" futhi "aspirin" futhi analogue yayo. Kwezinye izimo, basuke Kunconywa ukuphuza ngesikhathi esifanayo.
Kwatholakala ukuthi angaba ngu-70% eziguli ungenqaba ukwamukela izimali egazini thinners, futhi ngeke singaholela ezinkingeni. Kodwa uma isiguli livele ukuthambekela yakha amahlule, noma uye kwatholakala ukuthi une-fibrillation atrial, ziba esibophezelayo.
Izidakamizwa "Cardiomagnyl" futhi "Thrombotic Ass"
Omunye ethandwa kakhulu iyona antiplatelet ejenti aspirin, noma ezinye izidakamizwa, ezibandakanya i-aspirin. Ngokwesibonelo, ezibhebheni thinners igazi "Cardiomagnyl" zakha ngaphezu wathi main impahla esebenzayo okwengeziwe magnesium hydroxide. It neutralizes umphumela ongemuhle acetylsalicylic ene-asidi mucosa yokusetshenziswa pheshana emathunjini.
Nikeza ithuluzi for the nokuvinjelwa izinkinga nemithambo yegazi kanye senhliziyo ezifana oyingozi noma thrombosis. Kukhona iqembu elithile ezigulini ukuwaphuza kubalulekile: abantu abaphethwe isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile, umfutho wegazi ophakeme, hyperlipidemia, angina engazinzile. Prevention Kufanele uthathe zonke iziguli esezikhulile futhi ngalabo ababhema.
Amaphilisi igazi thinners "TromboAss" esinqunyiweyo amacala efanayo, futhi lapho izidakamizwa "Cardiomagnyl". Kodwa ngaphambi kokuba ubhalise kubo kubalulekile ukukhumbula ukuthi bafake kungekho magnesium ongavikela ulwelwesi lwamafinyila we isisu namathumbu.
Ekusebenziseni indlela ejenti antiplatelet kufanele lungabi naphutha kakhulu. Ngempela, uhlu Izimo babe enkulu ngokwanele. Phakathi kwabo:
- cerebral ukopha,
- ukopha ukuthambekela okungalungile,
- isifuba somoya kubangelwa reception kusho amaqembu salicylic;
- erosions noma ulcer ipheshana yesisu esigabeni acute;
- ezinzima esingamahlalakhona kwezinso;
- sokukhulelwa ku trimesters kuqala bese yesithathu yokukhulelwa, lactation;
- Hypersensitivity ukuze acetylsalicylic acid.
Kukhona nezinye izindawo eziningana lapho izimo lapho kuphuzwa ejenti antiplatelet akuyona efiselekayo. Yiba amaphilisi wangabaza igazi thinners ebekiwe iziguli sifo, umlando erosive kanye izilonda emathunjini isisu noma amathumbu, nge acinene polyposis, izimo nomzimba, engxenyeni yezinyanga ezintathu zokukhulelwa yesibili futhi kuze kube iminyaka engu-18.
Uma sicabanga ngakho konke okungenhla, ukuphuza le mithi ngeke kukusize ngalutho ngaphandle kadokotela. a kuphela onguchwepheshe angakwazi ukuhlola kungakhathaliseki ukuthi kudingeka isiguli, ukukhetha indlela efanele kakhulu ukunquma imithamo ezifanele.
Izidalwa engaziwa - futhi bayini? izidalwa elingaziwa emhlabeni (izithombe)
Imininingwane yokuthi ungakhathaza kanjani iklabishi ngokushesha futhi enandi ekhaya
EU.SSR uphawu izinga on the umkhiqizo kanye nomlando wayo
Dzheyson Stethem: Biography futhi amaqiniso athakazelisayo zokuphila